Abidy malagasy Info. About. What's This?
Ny abidy ara-drafipeo iraisam-pirenena hafohezina hoe API aminny fiteny frantsay, na IPA aminny fiteny anglisy, dia abidy ampiasaina ho anny fanoratana ny feonny fiteny tenenina. Izy io dia tsy ohatra ny fomba fanoratana anny vondrom-piteny, ny AAI dia abidy natao mba handrakotra ny ankapobenny fiteny rehetra. Navelatry ny mpandinika rafi-peo frantsay sy britanika ho anny Fikambanana ara-drafipeo iraisam-pirenena, navoaka taminny 1888 izy. Natao taminny 2005 ny famerenana farany.
Ny tarehin-tsoratra latina na dia tarehin-tsoratra avy aminny abidy latina. Litera ao aminny tarehin-tsoratra latina no mamorona ny abidy malagasy aminizao fotoana izao. Mampiasa ireo tarehin-tsoratra ireo hamoronany ny abidiny ny fiteniny ny ao Eoropa Andrefana sy Eoropa Avaratra ary Eoropa Afovoany. Mampiasa azy koa ireo firenena ivelani Eoropa indrindra ireo firenena nozanahinny Eoropeana, isanizany ny ao Amerika Avaratra sy Atsimo sy ny ao Afrika ary ny ao Oseania. Ireto avy ny litera fototra ao aminny vondron-tarehin-tsoratra latina aminny endriny soramadinika: a - b - c - d - e - f - ...
Ny tarehin-tsoratra arabo dia lamim-panoratana tsy ahitana afa-tsy renisoratra, natao hanoratana ny fiteny arabo sy fiteny hafa koa, ka soratana avy ankavana miankavia. Ny abidy arabo no tena fantatra mampiasa ny tarehin-tsoratra arabo nefa maro koa ireo fiteny mampiasa ny tarehin-tsoratra arabo. Tsy misy zanatsoratra hanoratana ny zanapeo izy fa mari-tsoratra sahalahala aminny teboka na faingo apetraka eo ambony na ambany na aloha na aorianny renisoratra hisolo ny zanatsoratra. Nanomboka taminny fielezanny finoana silamo dia maro ireo fiteny ankoatry ny arabo izay soratana taminireo tareh ...
Ny finoana silamo eto Madagasikara dia niorina tamin ny taonjato faha-7. Nandray anjara betsaka tamin ny fiforonan ny maha Malagasy ny Malagasy ankehitriny izy. Ny fikarohana nataon ny Pew Research Center tamin ny taona 2010 dia manambara fa ny 1.1%n ny mponina eto Madagasikara dia Miozolmana. 7% kosa izany araka ny The World Factbook - Madagascar. Aminizao 2020 izao dia eo anelanelan ny 10% sy 13%n ny mponin i Madagasikara ny Miozolmana eto amin ny Nosy. Ny ankamaroan ny Miozolmana eto Madagasikara dia manaraka ny finoana silamo sonita avy amin ny sekoly Shafý, niaraka tamina mpino Ahmadý ...
amin ny fiteny malagasy Tamin ny taona 1822 ny misionera dia efa afaka nanoratra ny fiteny malagasy merina tamin ny fampiasana ny abidy latina. I David
hanoratra. Izay no nahatonga an i Radama namorona ny abidy malagasy ankehitriny izay mifototra amin ny abidy latina nahay nanoratra ary namaky teny hatry ny
elliniká Mampiasa ny abidy grika ny Grika rehefa manoratra ny teniny. Avy amin ny abidy grika ny abidy latina izay anoratana ny teny malagasy sy ny teny frantsay
britanika sady nanombohan ny fanoratana ny teny malagasy amin ny abidy latina izay notsorina ka lasa abidy malagasy Teraka tamin ny 1793 tamin ny anarana Ilaidama
tononina hoe sɐ w paw.lu araka ny abidy ara - drafipeo iraisam - pirenena Masindahy Paoly amin ny teny malagasy dia tanàna ngeza indrindra any Brazila
anaran ny isa. Mampiasa ny abidy latina rumi ny fiteny malay ankehitriny, na dia mbola miasa koa aza ny abidy arabo jawi abidy ôfisialin i Malaizia
dia tarehin - tsoratra avy amin ny abidy latina. Litera ao amin ny tarehin - tsoratra latina no mamorona ny abidy malagasy amin izao fotoana izao. Mampiasa
Griffirths izay nanangana sekoly, nametraka ny fanoratana teny malagasy tamin ny alalan ny abidy latina ary nandika ny baiboly, ary koa nampiditra karazana
amin ny abidy latina. Mpaminany hafa: Ἠσαΐας Êsaías malagasy Isaia na Izaia hebreo: י ש ע י הו Yesha ayāhû Ἱερεμίας Hieremías malagasy Jeremia